Ideal Protein inoshandiswa pakuvaka Musasa Misa
musha » Blog » Ideal Protein inoshandiswa pakuvaka Musasa Misa
Zvirongwa zvepurotini zvichida chimwe chezvinhu zvinokakavhiringidza muhutano uye muhutano hwehutano.
Zvingave zvevatambi kana vanhu vanowanzogara, zvidzidzo zvakawanda uye maonero akaitika panguva ino kuwana hutano hwakakwana hunoda kuti muviri womunhu unode.
Kunyangwe izvi zvidzidzo uye mafungiro zvinofanira kujekesa mhinduro yakajeka, zvinoratidzika kuti ivo nenzira imwechete vakabereka mimwe mibvunzo kupfuura mhinduro.
Muchikamu chino, chinangwa changu chikuru ndechekupa kuvanhu avo vari kutsvaga kuvaka misi miviri nzira yakakwana yokuverenga yavo zuva nezuva mapuroteni anodiwa.
Zvinonyatsozivikanwa kuti kana iwe uchida kuvaka mishonga iwe unofanirwa kudya kudya kunowanikwa mune mapuroteni.
Kune dzimwe nutritionist dzinokurudzira kuti vanhu vose vanoda kuvaka mishonga vanofanira kuva ne 25-30% yezvokudya zvavo zvakagadzirwa nemapuroteni, chinhu chandisingawirirani nacho.
30% kubva pane zvekudya izvo zvinoumbwa ne1000 makorikori zvakaenzana ne 75 gramu zveprotini pazuva, chinhu chisiri icho chikuru. Asi ngatimbofungidzira kuti munhu ane kudya kwakagadzirwa ne4000 makorikori, izvi zvinoreva kuti munhu uyu achafanira kudya 300 gramu yemapurotini pazuva, chinhu chinowedzererwa uye chinogona kutungamirira kune zvinetso zveutano.
Nzira yakanakisisa iyo munhu anogona kugadzira zvido zvayo zvezuva nezuva zveprotini kuitira kuti iye avake misumbu uye kuchengetedza hutano hwake huri nani pahutano hwakanaka kuburikidza nekushandisa magiramu eprotini pound pemiviri yechipfuva uye kwete misikiti.
Verenga zvakanyanyisa pamusoro, ndakati Muviri Muviri Misa kwete muviri mukuru.
Kazhinji munhu anoda kutora 0.9 gramu yeprotini paundi pound yemuviri wechipfuva kuti uite misumbu. Saka, kana muviri wako uine maune 150 lbs iwe uchada kudya 135 gramu yeprotini zuva rega rega.
Asi pamwe chete nemashoko ari pamusoro apa imwe nyaya inobuda:
Nzira yekuwana sei muviri wako wakaonda (LBM) kuyerwa ?!
Kuti iwe uwane muviri wako wakaonda muviri uremu, unofanirwa kuziva mazana ako emafuta emuviri kubva pachiremera chakazara.
Asi ngatifunge kuti hauzivi, saka iwe unosarudza ndezvipi zvinotevera: enda kunechiremba uye kumubvunza kuti akubatsire kana kutarisa chati iri pasi apa:
Mushure mekuona chati iri pamusoro apa iwe unofanira kuziva nekufungidzira zvinokonzerwa nemafuta emuviri zvaunayo panguva ino. Zvechokwadi iwe haugoni kuziva nemazvo chikamu chako chemazana emafuta, asi zvose zvaunoda ndeyekufungidzira.
Saka ngatifunge kuti iwe unobatanidza mu 15% chikamu uye huwandu hwehuwandu hwehuviri huri 160 lbs. Izvi zvinoreva kuti LBM yako ndeye 85% ye 160 lbs. Saka zviri pachena kuti LBM yako ndeye 136 lbs.
Iye zvino zvaunoziva kuti muviri wako wakasimba uri 136 lbs iwe unogona kuisa mapuroteni ako ezuva nezuva kuburikidza nekuita maitiro anotevera maitiro:
0.9 * LBM = PR (protein inoda)
Somunhu ndinotenda kuti iyi ndiyo nzira yakanakisisa iyo munhu anogona kuverenga nenzira yakakwana mapuroteni ake ezuva nezuva.
Ramba uchifunga kuti kana uine zvimwe zvinangwa pane kuvaka masumbu iwe haufaniri kushandisa mazano aya pamusoro apa.
Kutsvaga mapuroteni matsva? Buda Simply Protein Yakanakisa Mutengesi Sample Pack